Maqal: Urur siyaasadeedyada Midnimo & Udad oo qaadacay Doorashooyinka Puntland – SBC
Maqal: Urur siyaasadeedyada Midnimo & Udad oo qaadacay Doorashooyinka Puntland
Posted by Webmaster on April 4, 2013 Comments
Ururada Siyaasada ee lagu kala magacaabo Midnimo iyo Udad ayaa maanta garoowe kaga dhawaaqay in ay ka bexeen doorashooyinka Puntland.
Kulan saxaafadeed ay ku qabteen Madaxda Labadan urur gudaha Caasimada Puntland ee Garoowe ayay ku soo bandhigeen go’aan ay ka qaateen Doorashooyinka golayaasha deegaanada Puntland kaa soo ahaa in aysan ka qeyb gali doonin
Waxa ay tabanayaan ee sababtay in ay ugaga baxaan ka qeyb galida doorashooyinka ayay ku sheegeen in wax ka bedel lagu sameeyay xeerka u yaala doorashooyinka Puntland ee horay loo ansixiyay waasida ay hadalka u dhigeene.
Gudoomiyaha Urur siyaasadeedka Udad Siciid Faarax maxamed ayaa saxaafada u sheegay in ururkiisa uu go’aan ku gaarya in aanu ka qeyb galin doorashooyinka puntland.
Waxaa isna saxaafada la hadlay oo go’aan noocaasi oo kale ah qaatay Gudoomiye ku xigeenka Urur siyaasadeedka Midnimo, waxaana uu sheegay in ururka uu gudoomiye ku xigeenka u yahay uu gaaray go’aankan ka dib markii uu arkay in aanay wadadii saxneyd ku soconin doorashooyinkii uu filayay in ay cadaalad ku dhici doonaan waasida uu hadalka u dhigaye.
Hadaba dhageyso Warbixin ku saabsan warkan iyo Wariye Samiiro C/raxmaan
warka ururada midnino iyo udad